နောက်ဆုံးအနေဖြင့် - ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်နွှယ်နေရန်အရင်းအမြစ်တစ်ခု! | Martech Zone
Social Media Examiner မှမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးချွန်သူများသည်သူတို့၏သီးသန့်အသင်း ၀ င်မှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်း။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏အတွေးအမြင်အသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ စမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်၊ နောက်ဆုံးပေါ်လူမှုရေးနည်းဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်တွင်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
သင် Society သို့ ၀ င်ရောက်သောအခါလစဉ်အချိန်နှင့်တပြေးညီ၊ နည်းဗျူဟာနှင့်ကျွမ်းကျင်သူ ဦး ဆောင်သောမူရင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ၃ ခုကိုသင်ရရှိမည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရေးကြီးသည့်နောက်ဆုံးပေါ်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုသင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်သင်လိုအပ်သောဆက်လက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုကိုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်သင်ကဲ့သို့စျေးကွက်ချင်းတူသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်မည်။
သင်၏ရွယ်တူချင်းများသည်သင်ကဲ့သို့သောရုန်းကန်မှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသည်ကိုသင်စဉ်းစားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူသင်အခြားစျေးကွက်များနှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကူညီနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာအေးမြအစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ အရာအားလုံးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်ပျက်! လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်သင်ကဲ့သို့သောအလုပ်များသောစျေးကွက်သမားများအတွက်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖန်တီးထားသည် သင်ဟာလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ရုံးခုံနေရာ - သင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့တခြားစျေးကွက်သမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုလေ့လာရန်ဒီကိုသွားပါ.
Social Media Examiner ရှိအဖွဲ့သည်သင်နှင့်အလုပ်များနေသောစျေးကွက်သမားများနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်နေရာအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန် ၁၁ လကြာကြိုးစားခဲ့သည်။ အမှားများစရာများများစားစားမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ်လူမှုနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးချလိုသည်။
သူတို့သည်သင်ရင်ဆိုင်ရသောထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုနားလည်ရန်စျေးကွက်ပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ဒီမှာသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတာတွေ၊
သင်၏သင်ကြားပို့ချသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ရှေ့တန်းမှကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ၊ Social Media Examiner သည်သင့်အားရှေ့တန်းတွင်ရှိနေစေရန်ကူညီရန်နောက်ဆုံးပေါ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးနည်းဗျူဟာများကိုဆောင်ကြဉ်းပေးမည့်နက်ရှိုင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပူးပေါင်းသူ ၁၀၀+ နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသင်၏လူမှုမီဒီယာမေးခွန်းများကိုအဖြေရယူပါ။
ထုတ်ဖော် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Social Media Examiner အဖွဲ့၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်ပြီးသူတို့၏ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်တွဲဖက်လင့်ခ်များကိုအသုံးပြုသည်။
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအုပ်စုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖှဲ့ဝငျအဖွစျမိုက်ကယ် Stelznerလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်း